स्तनपानका फाईदाहरु | Hamro Patro
यो पनि हेर्नुहोस् : लुतोका घरेलु उपचारहरु
कानुनी दायरा अनि परिभाषाले स्पष्टसँग स्तनपानलाई प्रार्थमिक्ता दिँदै बाहिरी फर्मुला दुध र लेपहरुलाई दुरुत्साहीत पार्ने भनिएतापनि नेपालमा बटुवा र पसलेहरुले कुनै हिच्किचाहट बिनानै फर्मुला दुध र अन्य लेपहरुको प्रयोग र प्रयोगकालागि हौसला दिनेगर्दछन् ।
यसपालाको स्तनपान दिवसको नारा भनें सबै मिलेर दिर्घकालिन स्तनपान भन्ने रहेको छ । बिश्वमा करिब ४० प्रतिशतमात्र शिशुहरुलाई सम्पूर्ण र पर्याप्त रुपमा स्तनपान गराइन्छ भनें कूल १९४ देशहरुमा केवल २३ वटा देशमा मात्र ६० प्रतिशत माथि सम्पूर्ण रुपमा स्तनपान गराइने दर छ । स्मरण रहोस् बिश्वभरि कुनैपनि यस्तो देश छैन जसले स्तनपानको पर्याप्तता र सम्पूर्णतालाई चाहेजती कायम गर्न सकेको छ ।
नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भेका अनुसार केवल केवल ५५ प्रतिशत शिशुले मात्र जन्मेको एक घन्टा भित्र स्तनपान गर्न पाउने गर्दछन् । र ६ मनिाभित्रका केवल ६६ प्रतिशत शिशुले मात्र पर्याप्त र सम्पूर्ण स्तनपान गर्न पाउदछन् ।
नेपाल जस्तो न्यून आर्थिक स्तर भएको बिकासोन्मुख देशमा स्वस्थ पुस्ता पाउनकालागि स्तनपान मात्र एउटा भरपर्दो तरिका हो तथापि यसको जागरणमा नेपाली संयन्त्रहरुउदासिन देखिन्छन् ।
स्तनपानका ३ मुख्यमन्त्रहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
जन्मेको एकघन्टा भित्र स्तनपान
६ महिनासम्म सम्पूर्णरुपमा स्तनपान
र २ बर्षसम्म अन्य पुरक आहारहरु संगै स्तनपान
ल्यान्सेटको रिपोर्ट अनुसार यि तिनै स्तनपानका मन्त्र अवलम्बन गर्न पाए मात्र पनि बार्षिक रुपमा ८ लाख शिशुहरुलाई मृत्यूवाट जोगाउन सकिने छ ।
स्तनपानले शिशुमात्र नभई आमाकालागि अनि परिवारकै लागि पनि धेरै फाइदा गर्दछ । आर्थिक रुपमा पनि निशुल्क र सर्वश्रेष्ठ बाल आहारका रुपमा स्तनपान गर्नाले आमा र बच्चाबीचको भावनात्मक समबन्ध पनि अझ सुदृढ हुन्छ । दुख्खद कुरा त के छ भनें काठमाडौ लगायत बिकसीत शहरहरुकै पनि भएका मातृशिशु वार्डमा जाने हो भनें बेडै पिच्छे फर्मुला दुधका प्याकेट पाइन्छ ।
गाँउतिर पनि ५ महिनासम्म पनि स्तनपान नगराउने चलन पाइन्छ । नेपाली ठूलाठूला शपिगं मलहरुमा समेत एउटा स्तनपानको कुनो सम्म बनाइएको हुँदैन, स्तनपान मैत्री बिकासका संरचना नेपाली आवश्यक्ता हो ।
स्मरण गरौं त दैनिक रुपमा ८ पटक स्तनपान गराउन कतिजना नेपाली आमाहरु सक्षम छन् त ? भर्खरै नेपाल सरकारले सुत्केरी बिदालाई ६ महिना बनाएतापनि पर्याप्त र सम्पूर्ण स्तनपानकालागि २ बर्ष सम्म आमाहरु समय निकाल्न सक्षम छन त ? अनि बच्चाको स्वास्थजस्तो संवेदनशील कुरामा हामी किन संझौता गरिरहेका छौं, मननयोग्य कुरा छ ।
बिकसित देशहरुमा भनें कार्यवातावरणमै बालमैत्रि संरचना श्रृजना गरेर कार्यरत आमा र बच्चालाई एकै ठाँउमा समायोजन गर्ने चलन शुरु भएको छ । आशा छ अब आउने बर्षहरुका स्तनपान दिवसमा फर्मुला दुधहरुको बिक्रि बितरण नेपालमा हुने छैन र बिधालय स्तरवाटै स्तनपानकालागि जागरण गर्ने संरचना तैयार गरिनेछ ।
स्तनपान दिवस र सप्ताहको शुभकामना
अगस्त महिनाको १ तारिदेखि हप्तादिनसम्म स्तनपान सप्ताह मनाइन्छ, अगस्त ७ तारिखलाई स्तनपान दिवसका रुपमा मनाउने चलन छ ।